तिहारमा भुलेर पनि कसैलाई नदिनुहोस् यस्तो उपहार ! | सुदुरपश्चिम खबर
तिहारमा भुलेर पनि कसैलाई नदिनुहोस् यस्तो उपहार !
दिपावली आएको छ र हामी मनाइरहेका छौँ । यसलाई रोशनी र दियोबो बत्तीको चाड पनि भन्ने गरिन्छ । दीपावलीको पर्व कार्तिक महिनाको अमावस्याको दिनमा मनाइन्छ। हिन्दू धर्ममा यो चाडको ठूलो महत्व छ, खुशी, समृद्धि र अधर्ममाथि धर्मको विजयको प्रतीक मानिन्छ । ।
दिपावलीको दिनमा व्यक्तिहरू एक अर्कालाई अभिवादन गर्छन्, मिठाई दिन्छन्, खान्छन् र उपहार दिन्छन्। जे भए पनि, उपहार दिँदा, व्यक्तिहरूले केहि यस्तो उपहार दिन्छन्, जसले पछि उनीहरूको सम्बन्धमा नकरात्मक प्रभाव पार्न थाल्छ।
यस्तो अवस्थामा दिपावलीमा तपाईले त्यस्ता उपहार कसैलाई दिनु हुँदैन। आजको पोष्टमा, हामी तपाईंलाई केही त्यस्ता उपहारहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं, जुन कसैलाई उपहार दिनु हुँदैन।८८क्लिक गर्नुहोला ८८
दिपावलीमा माता लक्ष्मीको तस्वीर दिने बानी पनि छ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईं देवी लक्ष्मीको तस्वीर दिनुहुन्छ भने, ध्यान दिनुहोस् कि माता त्यस तस्वीरमा बसिरहेकी हुनुपर्दछ । यस्तो चित्रले घरमा देवी लक्ष्मीको स्थिरता दर्शाउछ ।naulotoday